Home » Property (Page 8)
မြေကွက်ကျယ်ရောင်းရန် ပါရမီ၊မဉ္ဇူလမ်း 45×80 သိန်း တသောင်း ၊ (10000)သိန်း ဆက်သွယ်ရန်=01501939 0973094919
Property, Property Agents, Property for Sale, Stuff for Sale | myint thu | November 6, 2013
***လုံးခြင်းခြံနှင့်အိမ်ရောင်းမည်*** နဝဒေးအိမ်ယာ 70×60ပေ၊2RC(32'×32') 1MBR+1BR(အပေါ်ထပ်) 2BR(အောက်ထပ်)၊ထမင်းစားခန်း၊မီးဖိုချောင် ဧည့်ခန်း၊ရေချိုးခန်း ၃ ခ...
***အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်*** ပါရမီ ၊ကံ့ကော်မြိုင်လမ်း 60'×80' တထပ် သစ်သားအိမ် ဈေးနှုံး=12000 သိန်း(သိန်း တသောင်းနှစ်ထောင်) ညိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ဆက...
Freshly Renovated which will WOW u likeabrand new house. Big House with Big Compound.4bedrooms + petition-able spaces (which is ideal for office area). Clos...
Condo အခန်းသစ် ရောင်းရန်ရှိသည်
ဖိုးစိန်ကွန်ဒို ဖိုးစိန်လမ်း၊ဗဟန်းမြို့နယ် ၃ လွှာ၊ 1750 square feets အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး၊အသင့်နေနိုင် လူမနေရသေးပါ(အခန်းပိတ်ထားပါသည်) အရောင်း၊3000 သိန်း(အ...
******ရောင်းမည်****** ခြံရောင်းရန်ရှိသည် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊လှည်းကူးမြို့နယ် စခန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု တာစုံလမ်းဝမှဖေါင်ကြီးလမ်းသို့အဝင်ဝနားတွင်...
Huge Land for Sale in GOLDEN VALLEY
Property, Property for Sale, Stuff for Sale | Aye Aye Aung | November 6, 2013
The compound is very big. 16605 square feet. Has an old house. Good for those who wants to buildaschool or could beahouse for big family. Price: 45,000L Ple...
ဘိုတထောင်မြို့နယ် Condo အခန်းသစ် ရောင်းရန်ရှိသည်
ဘိုတထောင်မြို့နယ် Condo အခန်းသစ် ရောင်းရန်ရှိသည် *** ရန်ကုန်၊ဘိုတထောင်မြို့နယ်၊အနော်ရထာလမ်း၊49 နှင့်50လမ်းကြား၊ Condo အခန်းသစ် ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ 6လွှာ၊40'...